”Sarin’ny tanàna madio” any Singapore , mampiseho mizàna tsindrian’ila amin’ny fikarakarana ireo mpifindra monina mandritra ny COVID-19. · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Janoary 2021 2:58 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, русский, Français, বাংলা, polski, Español, English
Lasa fantsona fanangonana ireo kojakoja ilaina sy fanomezana mifototra amin'ny filan'ny mpiasa any amin'ireo efitrano fatoriana ny ‘Harona iray, boky iray’ -tetikasa notarihan'ny mpiasa mpifindra monina mba hampiroboroboana ny vakiteny. Sary avy amin'ny pejy Facebook ‘One Bag, One Book’. Nahazoana alàlana
Noderain’ny tatitra an-gazety manerantany i Singapour amin’ny fomba fifehezany ny fiparitahan’ny “COVID-19”. Saingy ny herinandro voalohan'ny volana aprily 2020, dia nahitana fitomboana tampoka ny tranga tao amin'ny firenena, indrindra eo amin ireo mpiasa mpila ravinahitra. Niteraka ahiahy noho izany ny zava-misy satria mety ho nataon'ny governemanta Singaporeana an-tsirambina ireo mpiasa mpifindra monina tamin'ny fandraisany an-tànana ny valanaretina COVID-19.
Ny 7 Aprily , nambaran'ny Governemanta ny fametrahana ny ” circuit breaker” (fanamarihan'ny mpamoaka lahatsoratra: raisina amin'ny hevitra hoe fanokana-monina) izay saika mampiditra ny firenena manontolo sy ireo mponina 5,7 tapitrisa ao aminy ho amin'ny fihibohana. Nilaza ny Minisitry ny fahasalamana ao Singapour hoe :
Tsy maintsy manisy hisatra isika, hisatra mafy, hampihena ny fifindran'ny valanaretina. Io no tiana holazaina amin'ny hoe “circuit breaker”. Ilaina ny fampitomboana ny fanajàna ny elanelana , hampihenana betsaka ny fivezivezena sy ny fifandraisana eny amin'ireo toerana natao ho an’ny besinimaro sy voatokana.
Ny 21 Aprily , nanambara ny praiministra fa hitatra hatramin’ny voalohany volana Jona io ‘’circuit breaker ‘’ io.
Nahatratra 12 075 ny tranga COVID-19 tao Singapore hatramin’ny 24 Aprily , saika ny 80 isanjato amin'izy ireo dia mpiasa mpifindra monina mipetraka ao amin'ny efitrano fatorian'ireo mpiasa mpila ravinahitra. Mbola i Singapore izao no manana ny tranga COVID-19 betsaka indrindra any Azia Atsimo Atsinanana, na dia milaza aza ny governemanta fa ny maha-avo io tarehimarika io dia noho ny fitiliana lalina loatra sy mahery setra.
Mihoatra ny 300.000 ireo olona manana fahazoan-dàlana miasa ao Singapour izay mivantana any amin'ireny efitrano fatoriana ho an'ny daholo be ireny. Ny ankamaroan'izy ireo dia lehilahy avy any amin'ireo firenena ao Azia Atsimo toa an'i Bangladesh sy India. Mipetraka amina efitrano misy fandriana ho an'ny olona 12 hatramin'ny 20 izy ireo, ka izay no manasarotra ny fampiharana ny fanajana ny elanelana.
Tampoka teo, ny ankamaroan'ireny trano fatoriana ireny dia nivadika ho vondrona fandraisana COVID-19 ka lasa misy ny tsy fahafahan’ny mpiasa mivoaka ny efitranony noho ny fametrahan'ny Governemanta ekipa mpitsabo hanao fitiliana sy hametraka ny fomba fanao amin'ny fitokana-monina.
Nanoka-monina mpiasa efa ho 20 000 tao amin'ny efitrano roa fatoriana ho an'ny daholo be i Singapour taorian'ny fifaneraseran’izy ireo tamin'ny olona 90 voan'ny coronavirus, raha kely indrindra. Ireo mpiasa mpifindra monina, mipetraka any amin'ireny toby ireny, dia milaza fa toy ny baomban’ny valanaretina coronavirus miandry hipoaka izy ireo. https://t.co/BppsWDV1RT pic.twitter.com/liQSkdS2Hq
-Reuters (@Reuters) 7 Aprily , 2020
Niteraka resabe ny fandraisana ny fanapahankevitra mikasika ny fanavahana sokajy manokana ho an'ireo mararin'ny COVID-19 any amin’ireo trano fatoriana ho an'ny daholo be ireo. Nitatitra ny ‘’ Coconuts ‘’, sehatra mahalaeotena mpampita vaovao any Azia Atsimo fa :
Nandray ilay fanapahankevitra maha-be resaka ihany koa ny Governemanta mba hanavahana ireo antontanisa: iray mifandraika amin'ireo mpiasa mpifindra monina, ary iray an'ireo teratany sy mponina maharitra ao Singapour. Nampangaina ho ”nanavakavaka” ny mpifindra monina izy ireo , indrindra amin'ny fanondroana notsotsorina ny olom-pirenena sy ny mponina ho ”vondrompiarahamonina”.
Tamin'ny 13 aprily, nanao fanarahamaso ny toetry ny fahadiovan'ilay orinasa navadika ho trano fatoriana niova ho orinas (Factory Converted Dormitories, FCDs) ny Minisiteran'ny asa Singaporeana:
Voamarika tany amina 57 FCD fa ny tsy fahombiazana madinika , ny tsy fisian’ny toeram-pitsaboana (infirmeria) sy ny faritra fanokana-monina no olana tena mateti-pitranga. Hita ho tsy azo ekena koa ny fahadiovan’ny ankamaroan’ireo FCD ireo.
Novalian’ny minisitrin'ny asa, Josephine Teo, ireo tsikera nanao hoe : tokony nanao fitiliana COVID-19 tany amin’ireny efitrano fatoriana ireny ny Governemanta tamin’ny volana Febroary, amin’ny filazany :
Satria tamin’izany fotoana izany, dia nirohotra nankany amin’ny hopitaly ireo mpiasa salama nangataka fitiliana. Nipetraka anefa ny ahiahy noho ny fisian’ny olona an’arivony tonga nanantona sy manafotra ireo mpiasan’ny fahasalamana.
Tamin’ny alalan’ny kabary tamin’ny fahitalavitra, nanome toky ireo mpiasa mpifindra monina i Lee Hsien Loong fa tsy hanary azy ireo ny Governemanta :
Ho an’ireo mpiasa mpifindra monina eto aminay, avelao aho hanamafy indray : hikarakara anareo izahay , toy ny fikarakaranay ny Singaporeana. Misaotra anareo ihany koa izahay amin’ny fiarahamiasa mandritra izao fotoan-tsarotra izao. Hokarakarainay ny fahasalamanareo, ny mahasoa anareo ary ny fivelomanareo. Hiaraka hiasa amin’ny mpampiasa anareo izahay mba hahazoanareo antoka fa ho voaloa ny karamanareo ary ho afaka handefa vola any an-tanindrazanareo ianareo. Ary ho ampianay ihany koa ianareo ho afaka mifandray amin’ny namanareo sy ny fianakavianareo.
Nanome fanampiana ho an’ny mpiasa ao amin’ny trano fatoriana ho an'ny daholo be ihany koa ny ” Transient Workers Count Too” izay fikambanana tsy miankina. Nampafahantarin’ izy ireo tamin’ny haino aman-jery sy ny besinimaro ny momba ireo mpiasa izay voalaza fa nohidian’ny mpampiasa azy tao amin'ny trano fatoriana. Notaterin’izy ireo ihany koa fa ny mpiasa sasany dia tsy mahazo fitiliana ny toe-pahasalamana sahaza azy , taorian’ny nanapahan'ny Governemanta hevitra hifantoka amin’ny fanenana ny fiparitahan’ny COVID-19. Notoherin-dry zareo ihany koa ny fiheverana fa ireo mpiasa no tokony homena tsony noho izy ireo mipetraka amin’ny trano fatoriana maloto.
Tiana ho tsindriana eto ny hoe ny olana / teritery ateraky ny fotodrafitrasa dia mitana anjara betsaka amin’ny fahafantarana raha maloto na madio ny toerana iray. Ny famolavolana ny toerana; ny hakitroky ny trano; ny fanarahamaso ny fivezivezena rehetra; ny fahaizana mandajalanja ny sehatry ny asa sy ny fiainana manokana angatahina amin'ireo mpiasa mpila ravinahitra, ny rafi-pitantanana sy ny fomba fitantanana izany rehetra izany dia ao anatiny daholo.
Tsy avy amin’ny olombelona akory. Fa noho ny rafitra misy. Alohan'ny hanomezanao tsiny ireo mpiasa any ambanin'ny antanan-tohatra dia jereo aloha ny fari-pahaizan'ireo olona mipetraka ery amin'ny tampony.
Ny mpisolovava sady diplaomaty teo aloha, Tommy Koh, dia nanoratra tao aminy Facebook fa ireo tranga COVID-19 any amin’ny ireo efitrano fatoriana ireo dia tokony ho fanairana ho an’i Singapour ny mba hikarakarana misimisy kokoa ireo mpiasa ireo :
Nomen'ny governemanta alàlana ny mpampiasa ireo mpiasa ireo ho afaka hitondra azy ireo amin’ny fiara vaventy tsy misy seza. Mijanona ao amin’ny efitrano fatoriana ho an'ny daholo be feno olona izy ireo ary mifaneritery toy ny ‘’sardine’’, miisa 12 ny olona isakin’ny efitrano. Ny efitrano fatoriana kosa anefa dia sady maloto no tsy manaraka fenitra ara-pahasalamana. Toy ny baomba miandry fipoahana ireo efitrano ireo. Amin’izao fotoana izao dia nitombo be ny isan'izy ireo ary maro ireo mpiasa voan’ny aretina ao. Tokony ho raisin’i Singapour izany ho fanairana mba hikarakarana ireo mpiasa mpila ravinahitra, izay ilaina toy ny ataon’ny firenena voalohany eran-tany fa tsy toa ny fomba mahamenatra hitondrana azy ireo amin'izao fotoana izao.
Nanoratra tao amin’ny ‘ Twitter ‘’ ilay Singaporiana mpanoratra , Kirsten Han, fa ny olona dia tsy tokana ihany fa ‘’ misy ihany koa ny olana ara-pahasalamam-bahoaka, no misy olana amin’ny maha-olona , no misy olana ara-pitaovana ary misy koa ny olana ara-toekarena’’. Fintinin'ilay fampahatsiahivana ny lesona tokony harahin’i Singapaoro sy ireo orinasa hafa:
18/Inona no tokony ho anatra hositomintsika ? Heveriko fa ny zavatra hitantsika ao #Singapore ; na dia manao tsara ny ankamaroan’ny zavatra tokony atao ianao , ka tsy miraharaha na koa tsy manao loha-laharana ny fikarakarana ireo marefo indrindra sy ireo voahilika eo amin’ny firenenao , dia tsy manana fomba mahomby ho fiadiana amin’ny #COVID19 ianao.
— Kirsten Han 韩俐颖 is on a “circuit break” (@kixes) 24 Aprily 2020